Tobia 1 - Ny Baiboly
Tobia toko 1
Herim-po nasehon'i Tobia rainy, fony izy babo tany Niniva.
1Tobia dia avy amin'ny fokon'i Neftali, sy amin'ny tananan'i Neftali anankiray, izay any amin'i Galilea ambony, eo ambonin'i Naasona, ao ankoatran'ny làlana miankandrefana, ka eo an-kavanan'ny tanànan'i Sefeta. 2Lasan-ko babo izy tamin'ny andron'i Salmanazara, mpanjakan'ny Asiriana, nefa na tany am-pahababoana tany aza izy, dia tsy mba niala tamin'ny làlan'ny fahamarinana. 3Isan'andro izy, dia nizara tamin'ireo rahalahiny, iray firenena aminy, sy babo toa azy, izay rehetra azony nomena.
4Na dia izy aza no zandriny indrindra tamin'ireo avy amin'ny fokon'i Neftali, dia tsy mba nanao fanahin-jatovo velively izy. 5Any ka fony ny olona rehetra nandeha hiankohoka tamin'ilay zanak'omby volamena nataon'i Jeroboama mpanjakan'Israely, izy irery kosa niendaka tamin'ny be sy ny maro. 6Nankany Jerosalema amin'ny tempolin'ny Tompo izy, niankohoka tamin'ny Tompo Andriamanitr'Israely, ary nanolotra tsy tapaka, ny voaloham-bokany sy ny fahafolon'ny fananany. 7Nozarainy, isan-telo taona, tamin'ny proselita sy tamin'ireo hafa firenena ny fahafolon-kareny rehetra. 8Ary hatry ny fony vao tanora herotrerony izy no nitandrina izany sy ny toy izany, araka ny lalàn'Andriamanitra. 9Nony efa lehilahy izy, dia nanambady vehivavy anankiray, iray foko aminy, atao hoe Anna, 10ka nitera-dahy taminy, izany nomeny ny anarany, sy nampianariny hatahotra an'Andriamanitra sy hifady ny fahotana rehetra, hatramin'ny fahazazany.
11Rahefa lasan-ko babo izy, mbamin'ny vady aman-janany, ka tonga tany Niniva, izay nisy ny iray foko aminy rehetra, 12na dia nihinana ny hanin'ny mpanompo sampy aza ny olon-kafa rehetra, izy kosa nitahiry ny fanahiny ho madio, fa tsy mba nandoto tena tamin'ny henan'ireny, na oviana na oviana. 13Ary noho izy tsy tapaka ny nahatsiaro ny tompo, dia nataon'Andriamanitra nahazo fitia tamin'i Salmanazara mpanjaka izy, 14ka nomen'io làlana ho any amin'izay rehetra tiany haleha, sady hahazo manao izay tiany hatao. 15Ka dia nandeha namangy ny lasan-ko babo izy, sy nanome torohevitra tsara azy ireo.
16Indray mandeha izy dia lasa nankany Ragesa, tanànan'ny Meda, nitondra vola talenta folo, avy amin'ny fanomezana be loatra nomen'ny mpanjaka azy; 17ary teo amin'ireo vahoaka be mpiray tamin-drazana aminy kosa, hitany ity lehilahy anankiray iray foko taminy, atao hoe Gabelosa, fa poritra mafy, ka natolony an'io ilay vola rehetra nentiny, dia nandraisany rosia taminy izany.
18Taty aoriana ela, nony efa maty Salmanazara mpanjaka, dia Senakeriba zanany no nanjaka nandimby azy. Nankahala fatratra ny zanak'Israely io mpanjaka io, 19ka nandeha namangy izay anisan'ny havany rehetra isan'andro Tobia, nanala alahelo azy, nizarany ny fananany izy tsirairay avy, araka izay azony atao; 20ny noana nomeny hanina, ny tsy nitafy nizarany fitafiana, ary fatratra ny fahazotoany nandevina ny maty na novonoina. 21Fa tamin'ilay Senakeriba mpanjaka nandositra avy tany Jodea, nony efa voan'ny faharesena namelezan'Andriamanitra azy, noho ny teny fanevatevana nataony, dia nisafoaky ny hatezerana izy, ka maro be tamin'ny zanak'Israely no nasainy novonoina ho faty; ary Tobia no nandevina ny fatin'ireo. 22Nisy olona nampandre izany ny mpanjaka, ka nasain'io hovonoina izy sy norobaina ny fananany rehetra. 23Tobia sy ny vadiny aman-janany anefa nitsoaka nandositra; tapitra nendahana ny fananany rehetra, nefa nahita izay hiereny tsara izy, satria maro olo-nohavanina. 24Dimy amby efapolo andro taty aorian'izany, dia novonoin'ny zanany naterany ny mpanjaka. Dia nody tao an-tranony indray Tobia, sady naverina taminy avokoa ny fananany rehetra. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0160 seconds